7 यूरोपका सबै आश्चर्यजनक फुटबल स्टेडियमहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7यूरोपका सबै आश्चर्यजनक फुटबल स्टेडियमहरू
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 25/12/2020)
उत्साहजनक, प्राणपोषक, शानदार, दिमागमा उड्ने, वर्णन गर्न पर्याप्त शब्दहरू छैनन्7युरोपका सबै भन्दा अचम्मको फुटबल स्टेडियमहरू. यसबाहेक, तपाईं सोच्नुहुन्छ भने पनि तपाईं तिनीहरूको महानता बुझ्न सक्नुहुन्छ, केवल तपाईं मा कदम जब, कि तपाईं वास्तव मा जादू बुझ्नुहुन्छ.
त्यसैले, यदि तपाईं एक उत्साही Byren म्युनिक हुनुहुन्छ, यी7फुटबल स्टेडियमहरू तपाईंको ध्यान र तपाईंको बकेट सूचीमा महिमाको स्थान पूर्ण रूपमा लायक छन्.
रेल परिवहन यात्रा गर्न सबैभन्दा वातावरण मैत्री तरिका हो. यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र सुरक्षित एक ट्रेन द्वारा गरिएको थियो, विश्व मा सर्वश्रेष्ठ ट्रेन टिकट वेबसाइट.
1. सबैभन्दा आश्चर्यजनक फुटबल जर्मनी मा स्टेडियम: Dortmund मा सिग्नल Iduna पार्क
सिग्नल इदुना यूरोपको सबैभन्दा ठूलो फुटबल स्टेडियम हो र यसको आयोजना गर्न सक्दछ 80,000 यसको प्रभावशाली गिलास मुखौटा र भूमिगत तताउने पछि उत्साही प्रशंसकहरू. यो कारणले हो 2006 नवीकरण. फिफा वर्ल्ड कप को लागी. त्यसैले, तपाइँ पूर्ण रूपमा जाडो खेलहरूको लागि तपाइँको फुटबल बिदाको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ.
सिग्नल इदुना त्यस समयदेखि जर्मनीको सब भन्दा ठूलो फुटबल मैदान हो 1965, र आज यो छ बरुसिया डार्टमन्ड फुटबल टीमको घर.
कसरी Dortmund मा सिग्नल Iduna फुटबल स्टेडियम को लागी?
You can get to the stadium via Dortmund प्रकाश रेल हल्का रेल र आरबी रेलहरू जुन अष्ट्रिया र जर्मनीलाई जोड्दछ.
कोलोन डार्टमन्ड ट्रेन मूल्यहरूमा
म्युनिकदेखि डार्टमन्ड ट्रेन मूल्यहरू
हनओवर डार्टमन्ड ट्रेन मूल्यहरु
फ्रैंकफर्ट डार्टमन्ड ट्रेन मूल्यहरु
2. Allianz Arena: म्यूनिख, जर्मनी
म्यूनिखको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो फुटबल स्टेडियम, Allianz Arena यूरोप मा एक नयाँ फुटबल स्टेडियम हो. जर्मनीको अलियान्ज फुटबल स्टेडियम खोलियो 2005 र एफसी बारेन म्यूनिख फुटबल टीमको गृह मैदान भएको छ.
यदि तपाइँ हुन म्यूनिख भ्रमण गर्दै फुटबल खेलहरूको लागि, तपाईं स्टेडियमको फुलाएको प्लास्टिक प्यानल र रंग परिवर्तन बाह्य द्वारा छक्क हुनेछ. यी2सुविधाहरूले Allianz मध्ये एक बनाउँछ7युरोपमा सबै भन्दा अचम्मको स्टेडियमहरू.
म्यूनिखको Allianz फुटबल स्टेडियममा कसरी पुग्ने?
You can get to Allianz Stadium from Frottmaning U-Bahn station, नजिकै अवस्थित.
3. इ England्ग्ल्यान्डको सबैभन्दा आश्चर्यजनक फुटबल स्टेडियम: वेंबली स्टेडियम
युरोप मा दोस्रो ठूलो फुटबल स्टेडियम, वेम्ब्ली स्टेडियमले आयोजना गर्न सक्दछ 90,000 प्रशंसकहरू. युके मा सबैभन्दा ठूलो फुटबल निर्माण भएको थियो 2009, र यसको सबैभन्दा प्रमुख विशेषता भनेको हो 134 मिटर अग्लो चाप, crowning the stadium. यसरी, तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि लिग कप खेलहरू हेर्दै, र राष्ट्रिय लिग प्ले-अफहरू एकदमै एक हुन् अचम्मको अनुभव.
त्यसैले, वेम्ब्ली एफए फाइनल कपको लागि मात्र होईन, लन्डनमा पनि केन्द्रीय स्थलचिन्ह.
लन्डनको वेम्बल फुटबल स्टेडियममा कसरी पुग्ने?
You should take the London Underground Circle Line from Paddington station to Baker St station and then change onto the London Underground Metropolitan Line to Wembley पार्क स्टेशन.
4. इटालीको सबैभन्दा आश्चर्यजनक फुटबल स्टेडियम: सान सिरो स्टेडियम मिलनमा
सान सिरो इटालीको सबैभन्दा ठूलो फुटबल स्टेडियम हो. मिलानको यो अद्भुत स्टेडियम दुई पटकको विश्व कप विजेता ज्युसेप मेजेजाको सम्मानमा नामकरण गरिएको थियो.
स्टेडियम भित्र खोलिएको थियो 1926 र होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ 35,000 उत्साही फुटबल प्रशंसक. यसको बाह्य बाहिरी भागमा तपाईंले छुटाउन नसक्ने सुविधाहरूमध्ये एउटा रातो फैलिएको गीडर हो.
कसरी मिलान मा सैन सिरो फुटबल स्टेडियम को लागी?
सैन सिरो फुटबल स्टेडियम हो5मिलान बाट किलोमिटर शहर केन्द्र. तपाईं सैन सिरो पुग्न सक्नुहुनेछ मिलन केन्द्रीयबाट M5 मेट्रो लाइनबाट.
5. मोनाकोमा लुई द्वितीय फुटबल स्टेडियम
लुइस दोस्रो फुटबल स्टेडियम यूरोप मा अर्को दिमागमा उड्ने स्टेडियम हो. मैदानको टाढा अन्तमा स्टेडियमको नौ प्रभावशाली आर्चहरू छन्. स्टेडियमले आयोजना गर्न सक्दछ 16,000 पृष्ठभूमिमा फ्रान्सेली रिभिएरामा महाकाव्य खेलहरूको लागि प्रशंसकहरू.
मा 1979 Prince Rainier III decided to rebuildanew sports arena in the Fontvieille district. पेरिसियन आर्किटेक्टहरूले भव्य अभियान लिए, जुन अन्त भयो 1984, र लुई द्वितीय स्टेडियमलाई युरोपको सबैभन्दा दर्शनीय स्टेडियमहरू मध्ये एक बनायो.
मोनाकोको लुई २ फुटबल स्टेडियममा कसरी पुग्ने?
लुई द्वितीय फुटबल स्टेडियम हो 10 लन्डनबाट रेलमा घण्टा टाढा.
6. ग्रुपमा स्टेडियम, लियोन
हाम्रो मा यो शानदार स्टेडियम7युरोपका सबै भन्दा अचम्मको फुटबल स्टेडियमहरू, होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ 60,000 प्रशंसकहरू. साथै, यो फ्रान्सेली फुटबल क्लब ओलम्पिक लिओनाइसको घर हो र यसमा फुटबल होस्ट गर्दछ 2024 पेरिसमा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलहरू.
त्यसैले, यदि तपाईं ओलम्पिक खेलहरूको लागि पेरिस भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले निश्चित रूपमा यो महान फुटबल स्टेडियम भ्रमण गर्नुपर्नेछ.
कसरी लियोनमा ग्रुपमा स्टेडियममा पुग्ने?
तिमी सक्छौ ट्राम लाइनको ठूलो ठूलो स्टेशन डेसिनेस ग्रुपमा स्टेडियममा जानुहोस् 3. यो स्टेडियमको नजिक छ – बस 10 मिनेट’ हिड्दै.
7. मार्सिलेमा वेलोड्रोम स्टेडियम
मार्सैलीको यो अद्भुत स्टेडियमले दर्शकहरूको लागि पछाडि ढोकै खोल्यो 1937. त्यस बेला देखि, भेलोड्रोम स्टेडियमले स्वागत गर्दछ 67,000 फ्रान्स मा प्रशंसकहरु हरेक फुटबल मौसम. तपाईंले स्टेडियमको बारेमा सब भन्दा धेरै देख्नुहुने चीजहरू ग्लास-आर्चड छत हो, जुन याद गर्न धेरै गाह्रो छ.
तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ, तर भेडोड्रोम स्टेडियम फुटबल स्टेडियम मात्र होईन. यसको विपरितमा, यो एक बहु-प्रयोजन स्टेडियम हो, साइकल ट्र्याकको साथ. आज, यो ओलम्पिक डे मार्सिले क्लब को घर को रूप मा सेवा गर्दछ.
मार्सेलीमा भेलोड्रोम स्टेडियममा कसरी पुग्ने?
Velodrome स्टेडियम को बारे मा छ 3.5 मार्सिलेज शहरको केन्द्रबाट किमी. त्यसैले, तपाईं मेट्रो लाइनको साथ स्टेडियम पुग्न सक्नुहुनेछ 2. तपाईं बाट मेट्रो समात्न सक्नुहुन्छ रेल स्टेशन यदी तिमी युरोप भरि यात्रा रेल बाट.
यदि तपाईं उत्साही फुटबल र खेल प्रशंसक हुनुहुन्छ भने फुटबल खेलमा भाग लिनु युरोपमा गर्न उत्तम चीजहरू मध्ये एक हो. यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी मध्ये कुनै पनि सस्ता ट्रेन टिकटहरू फेला पार्न मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं7युरोपका सबै भन्दा अचम्मको फुटबल स्टेडियमहरू.
के तपाईं हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा Most सबैभन्दा आश्चर्यजनक फुटबल स्टेडियमहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famazing-football-stadiums-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा चीन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप